David Alaba oo u hanjabay Liverpool kahor finalka Champions League – Gool FM
(Madrid) 23 Maajo 2022. Daafaca kooxda Real Madrid David Alaba ayaa u hanjabay kooxda reer England ee Liverpool kahor finalka Champions League ee lagu ciyaari doono caasimada France ee Paris 28-ka May.
David Alaba ayaa u sheegay majaladda Kicker ee ka soo baxda Jarmalka:
“Waxaan leenahay ruux dagaal oo gaar ah iyo shaqsiyad tartan ah oo aan soo bandhignay intii lagu jiray wareega 16-ka.”
“Waxaan nahay koox mar walba jawaab ku bixisa garoonka oo aan marna is dhiibin, waxaan nahay Real Madrid, waana tagi doonaa Paris inaga oo kalsooni buuxda ku qabna inaan garaaci karno Liverpool.”
“Waxaan aadi doonaa Paris si aan ugu guuleysano Champions League.”
Si kastaba ha noqotee, xiddiga reer Austria ayaa Real Madrid kula guulaystay horyaalka Spain xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee Los Blancos, waxana laga yaabaa in uu kooxda ka caawiyo in ay ku guulaysato koobkii 14-aad ee tartanka Champions League ee yurub, haddii ay ka adkaadaan Reds.